विजनेश – Page3– सप्तरंगी एफ एम
Home / विजनेश (page 3)
दमकमा रोयल मुगा होटल सञ्चालनमा
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/मंशिर ८/ दमक– ५ स्थित गोर्खाली टोलमा आज देखि नयाँ व्यवस्थापनका साथ रोयल मुगा होटल सञ्चालनमा आएको छ । वेलायती सेनामा कार्यरत रन्दिप राईले नयाँ व्यवस्थापनका साथ रोयल मुगा होटल सञ्चालनमा ल्याउनु भएको हो । राई ३० वर्षदेखि वेलायती सेनामा कार्यरत हुनुहुन्छ । सञ्चालक राईका अनुसार बिदेशमा रहेर कमाएको रकमल र शिपको आप्mनै ठाँउमा लगानि गरी खानपीनसहित आवास, ...
दमकमा नेको कन्सल्टेन्सीको शाखा स्थापना
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/मंशिर ७/ दमकमा नेको कन्सल्टेन्सीको सुभारम्भ गरिएको छ । सुनशरीको ईटहरीमा मुख्य कार्यालय रहेको कन्सल्टेन्सीको दमकमा शाखा कार्यालय स्थापना गरिएको साखा प्रबन्धक सुरज बन्जराले जानकारी दिनुभयो । यस क्षेत्रका नागरिकहरुलाई घर नक्शा डिजायन, मुल्यांकन, सर्भे लगायतका सेवा दिन कन्सल्टेन्सीको स्थापना गरिएको शाखा प्रबन्धक बन्जराले बताउनु भयो । यहाँ बाट कन्सल्टेन्सी सम्बन्धि सम्पुर्ण परामर्श समेत उपलब्ध गराईने उहाँले बताउनु ...